चीन पीईटी स्टिकर रिमूवर BT-336 निर्माता र आपूर्तिकर्ता | BGT
BT-6 336 कम तापक्रममा PET को सतहमा स्टीकर हटाउन डिजाइन गरिएको हो।
यो PET सब्सट्रेट सामग्रीको सतहमा सबै प्रकारका स्टीकरहरूमा लागू हुन्छ।
BT-6 336 को उपयोग को लाभ तल छन्:
१. यसले सफाई गरेपछि सब्सट्रेट सामग्रीलाई हानी गर्दैन, यो पहेंलो र भंगुर छैन।
२. स्टिकरलाई राम्रोसँग हटाउनुहोस् र एकै समयमा अन्य प्रदूषकहरू।
The. प्रक्रिया सरल र प्रभावी छ, एक पटकको लागि समाप्त, कम लागत।
In. इनोडोरस, गैर-विषाक्त, वातावरण लाई प्रदूषित गर्दैन। सफा उत्पादन।
प्लास्टिक र रबर
२k किलोग्राम / प्लास्टिक ड्रम
१ 、 यस उत्पादनलाई भण्डारित गर्नुपर्नेछ प्रकाशको ठाउँमा चिसोपनसँग।
२ las आँखामा लापरवाहीपूर्वक स्प्लेश गर्नुहोस्, कृपया फ्लश गर्न विशाल स्पष्ट पानी प्रयोग गर्नुहोस्।
、 G काम गर्ने बित्तिकै गमिएको पञ्जा आवश्यक छ।
प्रथम श्रेणी उत्पादनहरू, उत्कृष्ट सेवा, छिटो डेलिभरी र सबै भन्दा राम्रो मूल्यको साथ, हामीले विदेशी ग्राहकहरूबाट उच्च प्रशंसा प्राप्त गरेका छौं। हाम्रो उत्पादनहरू दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य पूर्व, यूरोप र अन्य क्षेत्रहरूमा निर्यात गरिएको छ।
"सत्य पहिलो हो र नाफा सुरक्षित छ", यो व्यवसाय मा हाम्रो मार्गनिर्देशन विचारधारा हो।
उच्च प्रविधि हुनु, चीन BGT उत्पादनहरूमा उच्च स्पष्टता, कुनै विषाक्तता, कुनै गन्धको विशेषताहरू हुँदैनन् र SGS द्वारा "खाद्य सुरक्षा र विषाक्तता परीक्षण" र RoHS परीक्षण पारित गरे। उत्पादनहरू खाना सम्पर्कमा लागू गर्न सकिन्छ।
चीन BGT हाम्रो टेक्नोलोजी उत्पादनको आधारमा विदेश र स्वदेशी दुबै कम्पनीहरूसँग घनिष्ट र लामो सहयोग प्रबर्द्धन गर्न समर्पित हुनेछ। चीन BGT हाम्रा ग्राहकहरुलाई केवल राम्रो उत्पादनहरु मात्र उपलब्ध छैन, तर स्थिर गुणवत्ता, इमानदार साथ साथै राम्रो सेवा संग।
(विवरणहरू र पूर्ण टीडीएस को लागी अनुरोध अनुसार प्रदान गर्न सकिन्छ “तपाईंको सन्देश छोड्नुहोस्”)
अघिल्लो: मसी मसीह BT-301/302
अर्को: मसी मसीह BT-300
पीईटी स्टिकर रिमूभर